Ciidamada maamulka Puntand oo duleedka Degmada Boosaaso ku xasuuqay 13 ruux oo la sheegay inay Al-shabaab ka tirsanaayeen |
Ciidamada maamulka Puntand oo duleedka Degmada Boosaaso ku xasuuqay 13 ruux oo la sheegay inay Al-shabaab ka tirsanaayeen
Maamulka Puntland ayaa dad shacab ah ku laayay magaalada Boosaaso kuwaasi oo ku eedaysan waxa loogu yeero argagaxisada.
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa xaqiijinaya in xabsiga dhexe ee Boosaaso lagala baxay maxaabiis kadibna lalaayay,ilo wareedyo ayaa sheegaya in 13 maxbuus lagu toogtay magaalada Boosaaso mid kamid ahna ay tahay haweenay.
Toogashada ayaa ka dhacday duleedka magaalada Boosaaso xalay saqdii dhexe xilli dadka magaalada hurdayeen.
mid kamida askarta maamulka Faroole ayaa isna lagu dilay boosaaso warar kala duwan ayaa kasoo baxay sababta askariga loo dilay, wararka qaar ayaa sheegaya in askariga ladilay uu ka biya diiday in la toogtay qof kamid ah maxaabiista oo ay qaraaba ahaayeen halka wararka kale ay sheegayaan in si kam ah loo dilay.
Dhammaan dadkan muslimiinta ah ee lalaayay waxaa loo heystaa inay xiriila la haayeen Al shabaab ama ay ka tirsanaayeen
Arintaai ayaa ku soo aadeyso xili deegaanada ay maamulaan maamulka la baxay Puntland ay ku soo badanaayaan falal ka dhan ah nabadgalyad.
Dadka la toogtay ee lagu eedeeyay inay Al-shabaab ka tirsanaayeen kuwaas ayaa kala ahaa: